Somalia: Booliska oo ka hadlay nin qudha ka jaray wiil yar
Home WARARKA Somalia: Booliska oo ka hadlay nin qudha ka jaray wiil yar
Muqdisho-(Berberanews)-Booliska Soomaaliya ayaa ka hadlay kiiska wiil da’ yar oo dhawaan lagu dilay Muqdisho, taasoo hadal hayn ka dhex dhaliyay bulshada.
Wuxuu sheegay in haatan meel gebagabo ah uu marayo baadhitaanka ku saabsan kiiskan oo ay caddeymo buuxa soo bandhigi doonaan dhawaan.
“Wuxuu aad uga cadhooday wax yar oo uu wiilka sameeyay, markaas ayuu wiilka aad u garaacay sababta ayuu leeyahay ayaa keentay in wiilka uu naqaska ku dhago oo sidaa ku dhinto,” ayuu yidhi afhayeenka booliska.
Warbixinta ayaa sheegay in dhibaato badan loo geysto carruurta iyo haweenka, taasoo ay hay’adda dalbatay in la joojiyo, iyadoo fartey dowladda iney xil gaar ah iska saarto waxka qabashada arrintaas.
Previous articleKomishanka Xuquuqal-insaanka oo ka hadlay 8 hablood oo Berbera ku xidhan
Next articleSomaliland: Madaxweyne Biixi oo kulan la yeeshay Maamulka Baanka iyo sarriflayaasha